भरतपुरको सभामा देउवाले भने : रेनुजस्तो काम गर्ने मान्छे नभएर को हुन्छ त ?- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
भरतपुरको सभामा देउवाले भने : रेनुजस्तो काम गर्ने मान्छे नभएर को हुन्छ त ?
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले रेनु दाहाललाई चितवन कांग्रेसले सघाउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार भरतपुरमा आयोजित गठबन्धनको संयुक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै दाहालको कार्यकालमा भरतपुरका हरेक गल्ली पिच भएको देउवाले बताए ।
'ठाउँठाउँमा पिच भएको छ, कालोपत्रे भएको छ। यहाँको भाउ बढिसक्यो, सबैलाई थाहा छ नि,' देउवाले भने, ' स्मार्ट सिटीको कुरा उठाउनु भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउने भन्नु भएको छ, यो सानो कुरा हो ? इन्टरनेसनल कन्फरेन्स हल बनाउने कुरा गर्नु भएको छ, यो सानो कुरा हो ?'
रेनु दाहालले देखेका सपना साना कुरा नभएको देउवाले बताए । 'अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बन्नु, अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्स हल बने संसारभरका मानिस यहाँ आउँछन् । उहाँले देखेका यी सपना यहीँकै लागि हो । तपाईंहरूका लागि हो,' देउवाले भने, 'त्यही पनि रेनु भएन भन्नुहुन्छ, यस्तो काम गर्ने मान्छे नभएर को हुन्छ त यहाँ ?' रेनुले आफ्नै कामले जितिसकेको पनि दाहालको भनाइ थियो ।
'उहाँ आफैले जितिसक्नुभयो । जित्नुहु्न्छ । हामीले त्यसै आरोप लाउने,' देउवाले भने । 'राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई हराए यहाँका मान्छेले के भन्लान्?,' रेनुलाई मत माग्दै देउवाले भने, 'यस्तो काम गर्नेलाई त हामीले धन्यवाद भन्ने हो । त्यसैले सबैले उहाँलाई सहयोग गर्नुहोस् ।'
कुनै पनि पार्टीले पनि बहुमत ल्याउन नसक्ने भएकाले मुलुकमा गठबन्धन आवश्यक रहेको देउवाको भनाइ थियो । गठबन्धन टुटाउने थुप्रै षड्यन्त्र भए पनि त्यसलाई आफूहरूले परास्त गर्ने उनले बताए ।
प्रकाशित : वैशाख २२, २०७९ १६:५८
काठमाडौँ — नेकपा मा‌ओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिलेको गठबन्धन राष्ट्रको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । भरतपुरमा बिहीबार आयोजित चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर पाँच दलीय गठबन्धन बनाएको भनाइ दोहोर्‍याए ।
अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनको भविष्य भरतपुरको चुनावी नतिजाले निर्धारण गर्न सक्ने बताएका छन् । उनले भने, 'यो गठबन्धनलाई १०/१५ वर्षसम्म लैजान सकिन्छ । चितवनवासी जनताको हातमा फैसला गर्ने बेला आएको छ । रेनु दाहालसहित टिमलाई विजयी गराउनुभयो भने म निकै उत्साहित हुनेछ ।'
उनले गठबन्धनको नेता कार्यकर्ताहरुको यो चुनाव अग्नीपरीक्षा रहेको बताए । 'म नेता कार्यकर्तालाई पनि भन्न चाहन्छु, दीगोरुपमा गठबन्धन बनाउन दिनुहुन्छ कि प्रचण्डलाई टेन्सन दिन चाहनुहुन्छ तपाईंहरुको हातमा छ,' अध्यक्ष दाहालले भने ।
दाहालले भरतपुरमा कुशासनको कुनै गन्ध आउन नदिइकन धेरै कार्यहरुमा रेकर्ड भएको उनले बताए । 'रेनुको म बुवाको नेताले गर्व गर्ने कुरा त छँदैछ । पार्टीको र परिवर्तनको नेताको हिसाबले पनि भरतपुरमा राम्रा काम भएको छ । चितवनवासीले गर्व गर्नुभएको छ । मलाई विश्वास छ, आजको दिनदेखि चितवनमा नयाँ लहर सुरु हुन्छ । यो जित अभूतपूर्व जितको रुपमा आउनेछ,' दाहालले भने ।
गठबन्धनको बारेमा चुनाव चिह्नको विषयलाई लिएर नकारात्मक कुराहरु फैलाएको पनि उनले बताए । 'तपाईंहरुले रुख र हँसिया हथौडा चिह्नको कुरा गर्नुभएको छ । रुखवालाले हँसिया हथौडालाई भोट हाल्न धेरै गाह्रो भएको देखेँ मैले । सपना ठूलै देखिएको थियो । गठबन्धनलाई १०/१५ वर्षसम्म लैजाने भनेको देखिएको थियो । व्यवहारमा सहज देखिन,' दाहालले भने,'२०४६ सालको जनआन्दोलन,२०६३ सालको जनआन्दोलन र नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हँसिया हथौडा र रुखको सहकार्य थिएन ?'
दाहालले सहमति, सहकार्य, एकता आजको आवश्यकता भएको बताए । उनले गठबन्धन तोड्नमा विगतमा अनेक खाले षड्यन्त्र भएको बताए । कहिले एमसीसीको लागि कहिले केका लागि भन्दै गठबन्धन तोड्ने प्रयास भएको उनले बताए । हरेक संकटलाई टारेर ल्याइएको गठबन्धन स्वाभाविक र प्राकृतिक भएको दाहालको भनाइ थियो । उनले सबैको साथ सहयोग भयो भने गठबन्धन धेरै परसम्म जान सक्ने र देश दुर्घटनामा पर्ने खतरा पनि टर्ने बताए ।
प्रकाशित : वैशाख २२, २०७९ १६:५५